रिचार्जर एपमा वल्र्डकप जर्सी १ रुपैंयामा ! « Pahilo News
रिचार्जर एपमा वल्र्डकप जर्सी १ रुपैंयामा !
प्रकाशित मिति :3June, 2018 12:29 pm
काठमाडौ, २० जेठ । विश्वकप फुटलको रौनक छाउँदै गर्दा तपाई आफुलाई मन पर्ने देशको जर्सी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मोबाइल एप रिचार्जरले १ रुपैंयामा जर्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका साथै नेपाली फुटबल प्रेमीलाई ९सय ९९ रुपैंयाको जर्सी १ रुपैंयामा उपलब्ध गराउने अफर रिचार्जरले ल्याएको हो ।
विश्वकप फुटबल सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा रिचार्जरले ठुलो संख्याका नेपाली फुटबल पारखीलाई लक्षित गर्दै यस्तो अफर ल्याएको हो । यो अफर आइतबार अर्थात जुन ३ तारिखका दिन दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुनेछ । यो अफर रिचार्जरको वेबसाइटमा नभई मोबाइल एपमा मात्र लागू हुनेछ ।
गुगलप्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिर्चाजर डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोले पछि प्रयोगकर्ताले १०० रुपैंया क्यास व्याक पाउने छन् । त्यस पछि जतिको मोबाइल रिचार्ज गर्नु हुन्छ, त्यत्ति नै क्यास व्याक पाउनु हुन्छ । यसरी प्राप्तहुने क्यास व्याकलाई रिचार्जरबाट सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।